Iapile kunye neapos; s 5g iphone 12 mini ngoku inokuba yeyakho mahala ngaphandle kokurhweba ngayo nantoni na
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Iapile kunye neapos; s i-iPhone ye-iPhone ye-12 mini inokuba yeyakho simahla ngaphandle kokurhweba ngayo nantoni na
Iapile kunye neapos; s i-iPhone ye-iPhone ye-12 mini inokuba yeyakho simahla ngaphandle kokurhweba ngayo nantoni na
Inikiwe indlela engathandekiyo i-5G-eyenziweyo i-iPhone 12 mini ibonakalisile ngokungqalileyo kanye kwi-bat, kuyamangalisa ngokungathandabuzekiyo ukuba ithathe ixesha elide komnye wabanikezeli beenkonzo ezingenazingcingo base-US ukumilisela eyona nto inkulu kakhulu apile & apos; s compact 2020 amandla endawo.
Sithetha ngesaphulelo esipheleleyo se- $ 700 efumanekayo (phantse) kungekho imitya eqhotyoshelweyo Inguqulelo (yazo zonke izinto eziphambili eziphathwayo) ze (kakhulu) ixesha elilinganiselweyo. Oko kuzisa ixabiso lokuqala le-5.4-intshi ebanjwa ngesandla ukuya kwi $ 0, kwaye konke okufuneka ukwenze ukuze ulungele le 'freebie' imnandi 'kukuthenga' i-64GB ye-iPhone 12 mini 5G kwisicwangciso esingasikelwanga mda.
Nokuba wenza njalo kwifowuni kunye nexabiso lentengiso rhoqo okanye ngesicwangciso sokuhlawula isixhobo, wena & apos; ujonge inani elipheleleyo le- $ 699.99 kwikhredithi yenyuso esetyenziswe kwiakhawunti yakho kwisithuba seminyaka emibini. Ngamanye amagama, ukuba ukhetha izavenge zenyanga, iirhafu zakho ezingama-29.16 ziya kubuyiselwa inyanga nenyanga de ... i-iPhone 15 ifike.
$ 0 $ 69999 Iphelelwe lixesha
Ngelixa i-T-Mobile kutshanje izenzele amagagasi amakhulu nge I-iPhone yasimahla ye-12 kunye ne-12 mini yokunyusa oomama kunye ne-apos; , umahluko ophambili phakathi kwento kunye ne-Big Red ngoku oyinikayo kukuba awudingi ukurhweba kulo naluphi na uhlobo lwesixhobo esele sikhona ngeli xesha.
Kananjalo akufuneki uphinde utsibe nangaziphi na ezinye iihupu okanye uhlangane nazo naziphi na iimeko ezongeziweyo, kwaye ngokumangalisayo ngokwaneleyo, oku kuchazwe ngentla kumaxabiso angama-700 eedola asetyenziswayo kwi-128 kunye ne-256GB eyahlukileyo yokugcina i-iPhone ye-12 mini ye-5G nayo, ukuzisa ezo ziye ezantsi $ 50 kunye ne- $ 150 ngokwahlukeneyo.
Gcina ukhumbula ukuba lo ngumcimbi okwi-intanethi kuphela osetelwe ukuphela kweveki, kwaye iimodeli ezininzi sele zidwelisiwe njengezihlengahlengisiweyo kwiVerizon & apos; iwebhusayithi esemthethweni ngexesha lokubhalwa, ukuthunyelwa kumcimbi weeveki (iintloko ) ukuba uyakhawuleza kwaye ubeke iodolo yakho ngokukhawuleza.
Nangona ayiphumelelanga ngokumangalisayo Kwilinge layo lokubuyisa ii-handsets ezibuyayo ngohlobo, i I-iPhone 12 mini ifumene uphononongo oluqinisekileyo kunyaka ophelileyo, ukuqhubeka nokubonisa kuluhlu lwethu Iifowuni ezingama-2021 kunye neepos; imali inokuthenga kwaye ngokuqinisekileyo iyasithwa olona lwabiwo mali lubalaseleyo lweefowuni ze5G phaya phandle ngamandla aluhlaza (ubuncinci) ngoku ukuba ungayifumana le nkwenkwe imbi ngokuncipha nge- $ 0 Zizonke.
Idroid turbo 2 vs s6
Uhlaziyo lwesoftware yesamsung galaxy s6
Ungayicima njani iakhawunti yakho yeGoogle +
Ungasusa njani iithebhu ze-Chrome kuluhlu lwakho lweeapps zamva nje (isikhokelo se-Android 5.0 Lollipop)
Eyona midlalo yeTV ilungileyo ngeMvulo iyafumaneka ngoku
I-Adobe Photoshop Express ye-Android ngoku ikuvumela ukuba ungeze izakhelo, imida, kunye nokulungisa amehlo esilwanyana esiluhlaza
IWalmart yenza ukuba kube lula kubathengi be-AT & T ukuba baphucule iifowuni zabo kwi-intanethi
Buyisa ifowuni endala ebomini kunye nezo zimvo zimnandi
I-Apple izakuphelisa ngokupheleleyo inkxaso ye-Hardware ye-iPhone 4 kule nyanga
I-Apple iPad 2 Umboniso weNgxelo eKhanyayo